Imvelaphi yeKettlebell. Amandla kunye neCardio Training
I-kettlebell iyindawo ekhethekileyo yokuzivocavoca. Nangona ibukeka njengebhokisi le-cannonball elinombambo wokukhwela phezulu, iyakwazi ukuphosakeka ngokupakisha nge-ironcast tea kwi-steroids. Kwakhona kwenzeka ukuba ikhule ekuthandeni, ukuvumela abagijimi kunye nalabo bazama nje ukuhlala bebunzima ukwenza uluhlu olubanzi lwezakhono ezizodwa zokwakha kunye neettlebells.
Kunzima ukusho ngubani owasungula i-kettlebell, nangona iinguqu zeengcamango ziya kwixesha elide njengeGrisi lasendulo.
Kukho i-315-pound kettlebell enegama elithi "Bibon wandiphakamisa ngentloko ngentloko enye" ​​eboniswe kwi-Archaeological Museum yase-Olympia e-Athene. 1704 njenge "Girya," eguqulela "kettlebell" ngesiNgesi.
I-Kettlebell yokuzivocavoca yadluliselwa ngokubanzi ngasekupheleni kweminyaka ye-1800 ngumgqirha waseRussia ogama linguVladislav Kraevsky, ebonwa ngabaninzi kuba nguyise oyisekayo we-Olympic training. Emva kokuchitha iminyaka eli-10 ehamba ngehlabathi ukuphanda ubugcisa bokusebenzisa ubugcisa, wavula enye yeeRussia zokuqala zokuqeqesha ubunzima apho i-kettlebells kunye nee-barbells zenziwa njengengxenye ebalulekileyo yenkqubo yokuzilolonga.
Ekuqaleni kwee-1900, ii-olimpiki zakwa-Olimpiki zaseRashiya zasebenzisa i-kettlebells ukuze zikhuphe iindawo ezibuthathaka, ngelixa amajoni awasebenzisa ekuphuculeni isimo sabo sokulungiselela ukulwa.
Kodwa bekude kube ngo-1981 ukuba urhulumente wagqiba ukuphosa ubunzima bakhe emva kohlobo kunye nokuqeqeshwa koqeqesho lwabahlali bonke njengendlela yokuphucula impilo kunye nemveliso. Ngowe-1985, imidlalo ye-kettlebell yokuqala ye-Soviet Union yayibanjwe eMacetsk, eRashiya.
EUnited States, yinto nje yakutshanje nje ngeyokuqala kwenkulungwane i-kettlebell ibanjwe kuyo, ingakumbi kwiminyaka embalwa edlulayo.
Abadumi be-A list ezifana noMatewu McConaughey, uJessica Biel, uSyvester Stallone kunye noVanessa Hudgens baye baziwa ukuba basebenzise i-kettlebell ekusebenziseni ukuqinisa kunye nefuthe. Kukho i-gym-kettlebell yohlobo lwe-kettlebell e-Ontario, eCanada, ebizwa ngokuba yi-IronCore Kettlebell club.
Yintoni eyahlula i-kettlebell workout ekuqeqesheni nge-barbells kugxininisa kwintlobo ebanzi yokuhamba equka amaqela amaninzi emisipha. Nangona ibhethri eqhelekileyo isetyenziselwa ukujolisa ngokuthe ngqo kumacandelo ama-muscle ahlukeneyo, afana ne-biceps, isisindo se kettlebell asikho esandleni, ukuvumela ukuguquka nokuhamba kwamanye umzimba. Kwimeko kwinqanaba, nantsi iikholebhu ezimbalwa ezijoliswe ekuphuculweni kwe-cardiovascular and strength:
Ukukhupha okuphakamileyo: Njenga-squat, i-kettlebell iphakanyisiwe ukusuka kumgangatho kwaye iphakanyiselwe kumgangatho wesigxina ngesandla esinye ngelixa ihamba ngokuya kwindawo yokuma kwaye ibuyele emzantsi. Ukutshintshana phakathi kweengalo zombini, le ntshukumo iyahlasela amahlombe, iingalo, izibonda, kunye nemisipha.
I-Lunge Cindezela: Ukubamba i-kettlebell phambi kwesifuba ngezandla zombini, phuma phambili kwaye uphakamise ubunzima phezu kwentloko yakho. Ukutshintsha omnye umlenze, oku kukuvumela ukuba ujolise amahlombe, umva, iingalo, u-abs, izitho kunye nemilenze.
Ukufuduka kweRashiya: Ukuma ngamadolo ngokukhawuleza kunye neenyawo ngaphandle, bamba i kettlebell nje nge-groin ngezandla zombini kunye neengalo zombini ngqo. Ukunciphisa nokuqhubela umlenze emva, uphonsa umlenze phambili kwaye uphendule ubunzima phambili ukuya kwinqanaba le-shoulder ngaphambi kokuba uvumele ubunzima bubuyele kwisimo sokuqala. Oku kuhamba kujoliswe kumahlombe, emva, emagqabini, ekugqumeni nasemilenzeni.
Ukongezelela, i-kettlebell iqhubhisa ama-calorie angaphezu kwama-exercised weight-exercing exercises, i-calories ezingama-20 ngomzuzu, ngokutsho kwesifundo se-American Council kwi-Exercise (ACE) . Oku kulingana nomlinganiselo ofanayo wokutshiswa oya kufumana kwi-cardio workout. Naphezu kwezibonelelo, omnye umva kukuba yiyo kuphela yokukhetha i-gyms.
Ngoko ungaphi na ukufumana izixhobo ze-kettlebell ngaphandle kweendawo ezicacileyo ezifana ne-IronCore gym?
Ngethamsanqa, inani elinyukayo le-boutique gyms linabo, kunye neekletabell. Kwakhona, ekubeni zixubene, ziphatheka kwaye zineentengiso ezininzi zithengisa amaxabiso afana neendleko zee-barbells, kunokuba kulungele ukuthenga nje isethi.
I-15 yeKrismesi eNandileyo kunye namaFiliya omNyaka omtsha
Indlela yokugcina uYom Hashoah
Ukuhlakulela izakhono zokuCinga ukuphumelela kwabafundi
Iibhola ezili-10 zeDwala ezinikezela ngoNcedo
IJografi yeDisney kwiiRafa